universal power company limited(universal power company limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
फेरि चम्किन थाल्यो एनआइसी एशिया, १८ करोड काण्डले युनिभर्सलमा पहिरो जारी
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा एनआइसी एशिया फेरि चम्किन थालेको छ । यो बैंकले दोश्रो बजारमा विगत केही दिनदेखि चमात्कारिक प्रगति गरिरहेको छ । कुल ११ दिनको कारोबार अवधिमा एनआइसी एशिया बैंकको सेयर मूल्यमा करिब १०० रुपैयाँको बढोत्तरी भइसकेको छ । यो अवधिमा सेयर मूल्यमा करिब २५ प्रतिशतको बढोत्तरी भइसकेको छ । मार्च २८ का दिन यो बैंकको...
युनिभर्सलको बजार मूल्य रु.१०० भन्दा पनि तल, शिवमको पनि घट्दै
काठमाण्डौ । बजार खुलेको केही मिनेटमै युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमीटेडको सेयर मूल्यमा पहिरो गएको छ । यो कम्पनीको सेयर दोश्रो बजारमा कारोबारमा आएको दिनदेखि नै लगातार पहिरो व्यहोरिरहेको छ । प्रत्येक दिन नेगेटिभ सर्किट लागिरहेको यो कम्पनीको मूल्य आइतबार बजार खुलेको केही मिनेटमै घटेर अंकित मूल्य भन्दा तल पुगेको हो । युनिभर्सल पावरको...
युनिभर्सल र शिवमको मूल्य घटेको घट्यै, एनआइसी एशिया बढेको बढ्यै !
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा कारोबार खुलेसँगै युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमीटेडको सेयर मूल्यमा दैनिकजसो नेगेटिभ सर्किट लागिरहेको छ । यो क्रम बुधबार पनि रोकिएन । चैत १० गते पहिलोपटक यो कम्पनीको दोश्रो बजारमा १२ वटा सेयर कारोबारमार्फत २३० कित्ता किनबेच भएको थियो । सो दिनको कम्पनीको अन्तिम बिक्रीमूल्य २७० कायम भएको थियो । त्यसपछि पनि...
सेयर मूल्यमा पहिरो: शिवमको थामियो, यूनिभर्सलको उस्तै
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा सेयर कारोबार सुरु भएको तेश्रो दिनसम्म दैनिक नेगेटिभ सर्किट व्यहोरेको शिवम सिमेन्ट्स लिमीटेड चौथो दिन बुधबार भने सुखद देखिएको छ । तेश्रो दिनसम्म सेयर मूल्यमा प्रत्येक दिन १० प्रतिशतको हाराहारीमा पहिरो व्यहोरेको यो कम्पनीको मूल्य बुधबार भने स्थिर रहेको छ । मंगलबार शिवमको सेयर मूल्यमा अघिल्ला २ दिन झै...
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा कारोबारमा आएको दोश्रो दिन पनि शिवम सिमेन्टको सेयरमूल्यमा नेगेटिभ सर्किट लागेको छ । यो दिन समेत शिवम सिमेन्टको सेयरमा खरीद अर्डर शून्य छ भने १ लाख १८ हजार भन्दा बढी कित्ता बिक्रीका लागि अर्डर पोस्ट भए पनि खरीद गर्ने नहुँदा त्यसको म्याचिंग हुन सकेन । बजार खुलेदेखि नै शिवम सिमेन्टको निकै ठूलो कित्ता सेयर...
युनिभर्सलको सेयर कारोबारमा, कति पायो ओपनिङ रेञ्ज ?
काठमाण्डौ । युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमीटेडको सेयर सूचिकरणसँगै बिहीबारदेखि दोश्रो बजारमा कारोबार खुलेको छ । नेप्सेले यो कम्पनीको सेयरको ओपनिङ रेञ्ज रु.१०१.११ देखि ३०३.३३ रुपैयाँ तोकिदिएको छ । पहिलो कारोबारका लागि यो रेञ्ज तोकिएको हो । यो कम्पनीलाई नेप्सेले कारोबारका लागि यूपीसिएल(ग्एअ०ि सिम्बोल समेत प्रदान गरेको छ । यो...
युनिभर्सल पावरको आइपीओ तपाईलाई कति पर्यो ? नतिजा हेर्नुहोस्
काठमाण्डौ । युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमीटेडको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ । बुधबार बिहान बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलको मुख्य कार्यालयमा एक समारोहका बीच आइपीओ बाँडफाँड भएको हो । आइपीओमा आवेदन दिने प्राय सबैले मागेजति नै सेयर पाएका छन् । यो कम्पनीले माघ २५ गतेदेखि निश्कासन गरेको आइपीओमा आवेदन दिने समय फागुन ८ गते बन्द गरिएको...
युनिभर्सलको आइपीओ यसरी भो बाँडफाँड, तपाईलाई पर्यो कि ?
काठमाण्डौ । युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमीटेडको आइपीओ अन्ततः बिक्री भएको छ । मंगलबारसम्म यो कम्पनीमा ९९ लाख ३८ हजार ३९० कित्ता सेयर खरीदका लागि आवेदन परेको हो । कम्पनीका अधिकारीहरुले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी चाँडै रिटर्न दिने तीव्र प्रचारप्रसार गरे पनि पहिलो चरणमै आइपीओ बिक्री हुन सकेन । दोश्रो चरणमा बिक्री खुल्ला भएको केही दिनपछि...
युनिभर्सलको आइपीओमा पहिलो दिन न्यून आवेदन !
काठमाण्डौ । आयोजना प्रभावितबाट बहिस्कृत भई न्यून कित्ता मात्र बिक्री भएको युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमीटेडको आइपीओलाई पहिलो दिन लगानीकर्ताले सन्तोषजनक रेसपोन्स गरेनन् । यो कम्पनीको आइपीओमा पहिलो दिन मागको तुलनामा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र आवेदन परेको हो । पहिलो दिन कम्पनीको आइपीओमा १० हजार ७९२ आवेदकबाट ९ लाख ५४ हजार १०० कित्ताका...